Fanodinana - magazine "Potato System"
Tena LOHATENY fanodinana
Tany Chelyabinsk dia nanamboatra "tranon-kala" ovy izy ireo.
Antsoin'ireo mpampiantrano ny vermicelli manify hoe "web spider", izay ampiana lasopy minitra vitsy alohan'ny handrahoana azy. Siantifika ao amin'ny South Ural Research Institute of Horticulture ...
Ny orinasa PepsiCo any amin'ny faritr'i Novosibirsk dia hanomboka hiasa amin'ny fiandohan'ny taona 2022
PepsiCo dia hanokatra orinasa famokarana sakafo masira any amin'ny faritr'i Novosibirsk amin'ny fiandohan'ny taona 2022, ny lehiben'ny biraon'ny solontenan'ny Investment ...
Ny fanafarana legioma, voankazo ary voankazo any Rosia dia nitombo tamin'ny 2021
Araka ny filazan'ny masoivoho momba ny varotra ROIF Expert, Rosia dia mampitombo ny fanafarana legioma mangatsiaka, voankazo ary voaroy, ary ny fanafarana Ejiptiana ...
Ny orinasan-tsakitsaky lehibe indrindra any India ka hatramin'ny varotra roa heny tamin'ny 2022
Pepsico dia mandefa zavamaniry tsakitsaky any India. Ity no orinasa lehibe indrindra amin'ity mombamomba ity ao amin'ny firenena. Vola ho an'ny ...
Tsy ampy ovy, tsy ampy amin'ny chips!
Sergey Artemov Harvest dia tsy mankasitraka ny chips. Mety hihena ny isan'ny fonosana misy tsakitsaky malaza eny amin'ny talantalana fivarotana noho ny tsy fahampian'ny ...
Ny Minisiteran'ny Fambolena sy ny Sakafo ao Belarosia dia nilaza fa ny repoblika dia mahafeno ny filany ovy avo lenta. Novidiana sy nafarana ho an'ny fanodinana indostrialy fotsiny ny tubers ...
P. 1 amin'ny 10 1 2 ... 10 Next.
"Fampivoarana ny fifantina sy famokarana masom-bary ao amin'ny Federasiona Rosiana"
Ny rejisitry ny tany fambolena dia noforonina ao Rosia